RASMI: Liiska xiddigaha kooxda Barcelona ay kala hortagayso Sevilla oo la shaaciyey… (MSG oo hoggaaminaya & Alba oo dib u soo laabtay) – Gool FM
(Barcelona) 18 Juun 2020. Waxaa la shaaciyey liiska xiddigaha kooxda kubadda cagta Barcelona ay kala hortagayso Naadiga Sevilla, waxaana hoggaanka u haya saddexda ciyaaryahan ee la isku yiraahdo MSG, halka sidoo kale uu soo laabtay.
Dhinaca kale waxaan liiskan ku soo bixin oo dhaawac looga reebay labada ciyaaryahan ee De Jong & Roberto.
Messi, Suarez iyo Griezmann ayaa hoggaaminaya liiska xiddigaha Barcelona ay ku wajahayso Sevilla kulankooda soo aaddan ee horyaalka La Liga, Alba ayaana dib shaxda ugu soo laabtay, halka ay dhaawacyo ku seegeen liiskan Umtiti, Sergi Roberto iyo Frenkie De Jong.
Xiddiga hore ee Sergi Roberto ayaa feeraha ka sheeganaya, halka laacibka reer Holland ee De Jong uu culeys saa’id ah ka qabo lugtiisa midig, taasoo la micno ah inaysan labada ciyaaryahan diyaar u ahayn safarka.
Liiska ay Barcelona shaacisay oo ay kala hortagayso Sevilla oo dhammaystiran:-
Daafacyada: Semedo, Pique, Lenglet, Firpo, Araujo, Alba, Chumi
Khadka dhexe: Rakitic, Busquets, Arthur, Vidal, Puig, Collado, Monchu
Weerarka: Suarez, Messi, Griezmann, Braithwaite, Fati, Saverio.
Maxay tahay Naynaasta ay xiddigaha Kooxda Arsenal ula bexeen Macallin Mikel Arteta kaddib markii uu iska diiday in 'Boss' loogu yeero?!